မည်သို့မှအတုတစ်ခုခေါ်ရန် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပုံ ANDROID အတုတွေတစ်ဦးကဖုန်းဆက်ဖို့
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » ပုံ ANDROID အတုတွေတစ်ဦးကဖုန်းဆက်ဖို့
ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကမ္ဘာ၏အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်သင့်ရဲ့အစစ်အမှန်အရေအတွက်ကဖုံးကွယ်ထားရန်လုံးဝဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက အတုခေါ်ဆိုမှု ID app ကို android ဖုန်းအဘို့အသင်ဤအောင်မြင်ရန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျခေါ်ဆိုမှုကိုအတုအဘို့အများမည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက်, သင်ကသင်၏ဘဏ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့မလိုဘဲဒါလုပ်ဖို့လွတ်လပ်မှုပေးနိုငျသောကွဲပြားခြားနားသော apps များရှိပါသည်။ ဤရွေ့ကား apps များစျေးပေါသို့မဟုတ်အခမဲ့ burner ဖုန်းမျိုးရှိပါတယ်။
အတုခေါ်ဆိုမှု ID apps များဟာအလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာဈေးကွက်ထဲမှာဖြစ်ရပြီနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူများကိုကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်အဘို့ထိုသူတို့သုံးပါ။ ဤရွေ့ကား apps များအတန်ငယ်ကြောင့် charlatans, လိမ်လည်သူများကို, ဘဝ duping နှင့်ချိုးဖောက်သို့သူတို့ကိုငါလျှောက်ထားကြသူ telemarketers, ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုး၏ privacy ကိုမှမကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်ပြီ သို့သော်သင်တစ်ဦးအတုဖုန်းခေါ် app ကိုလိုအပ်နိုင်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောသည်အခြားခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်ဤအကြောင်းပြချက်များပါဝင်သည်: ပုဂ္ဂိုလ်ရေး privacy ကိုအကြောင်းပြချက်, စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်, နောက်ပြောင်မှုများနှင့်ပိုပြီး။
Spoofcard က post ကိုအဆိုအရအရေအတွက်ကတဦးတည်းဖုန်းကိုလှည့်စားမှု app ကို, ဖုန်းလှည့်စားမှု "စစျမှနျတဲ့မူလအစ ID ကိုဖုံးကွယ်နိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ခေါ်ဆိုမှု ID မှပေးပို့သည့်အချက်အလက်ပြောင်းလဲများ၏လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့စည်းမျဉ်းများအတွက်, ခေါ်ဆိုမှု ID spoofing သင်ခေါ်ဆိုခထားရှိခဲ့သည့်အမှန်တကယ်အရေအတွက်ကိုပုံစံထက်ကွဲပြားခြားနားသောဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ မကြာခဏကြိမ်, ခေါ်ဆိုမှု ID spoofing ၏အရေးအပါဆုံးအသှငျအပွငျ, အရှင်သငျသညျသူတို့တစ်တွေသတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာတစ်ခုကနေတောင်းဆိုနေသော်လည်းအဖြစ်ပေါ်လာဖို့စွမ်းရည်ပေးခြင်း, ဒေသကုဒ် spoofing ဖြစ်ပါတယ်။ "
သင်အတု CALLER ID ကို APP ကိုလိုအကြောင်းရင်း
A အတုခေါ်ဆိုမှု ID app ကို အများအားဖြင့်ကြောင့်ကြောင့်များသောအားဖြင့် Spam တွေကို, လိမ်လည်သူများကို, telemarketers နှင့်အများဆုံးရိုးရိုးသားသားနှင့်မရိုးသားသောအခြားလူများကအသုံးပြုအရှိဆုံး tools များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, လူတွေသူတို့ကိုတောင်းဆိုချင်ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုမှလိမ်လည်မှုနှင့်ကောက်သောသဘောနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိ၏ သို့သော်ထိုသို့သကဲ့သို့စစ်မှန်သောတစ်ခုကိုနေ့စဉ်ခွအေနမြေားလျှောက်ထားပါဘူး; ဥပမာအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို client ကိုခေါ်ဆိုမှုကနေဖန်ဆင်းတော်ခံခဲ့သည်အတိအကျဘယ်မှာသိတယ်လျှင်မဟုတ်ဘဲဖြစ်နိုင်သမျှပါပြီမဟုတ်ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးတည်ထောင်ရန်အတုခေါ်ဆိုမှု ID app များကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အောက်တွင်အတုခေါ်ဆိုမှု ID apps များ၏အခြား legit နှင့်အရေးကြီးသောအသုံးပြုမှုဖြစ်ကြသည်။
အတုခေါ်ဆိုမှုများ client များအနေဖြင့်မလိုလားသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုထံမှသင်တို့ကိုကာကွယ်ရန်:
ဆရာဝန်များမကြာခဏထိုနေ့၏ခပ်သိမ်းသောကာလသူတို့ကိုတောင်းဆိုရာမှလူနာကာကွယ်တားဆီးဖို့ဟာ android များအတွက်အတုခေါ်ဆိုမှု ID app များကိုသုံးပါ။ ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်ကုမ္ပဏီ site ၏အဆက်အသွယ်လိပ်စာ၌သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရေအတွက်ကပေးချင်မပေးစေခြင်းငှါ,; ထို့ကြောင့်သူသည်အတုအရေအတွက်ကပေးရမယ့်လှည့်စားမှု app ကိုသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ ပြည်သူ့မထင်မှတ်သော, stalkers နှင့်ဖြစ်ကောင်းသူတို့ရဲ့ privacy ကိုကျူးကျော်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုညှဉ်းဆဲသူကို up-to-no-ကောင်းသောယောက်ျားမိန်းမမှမိမိတို့ကိုကာကွယ်ပေးရန်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျအတုခေါ်ဆိုမှု ID app များကိုသုံးပါ။ ထိုသို့သောတွေ့ဆုံများ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတကယ်ပါးလွှာများမှာ; ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ surfing သည့်အခါသို့သော်တဦးတည်းကလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်းသတိပြုရကြမည်မဟုတ်နိုင်ပါ။
အတုခေါ်ဆိုခ apps များဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့၏လုပ်ရတဲ့ကိုဖယ်ရှား:
မကြာခဏချိန်းတွေ့ site ကိုသို့သွားသူတွေကိုသူတို့ကမကြိုက်ဘူးလူတွေကိုတွေ့ဆုံတက်အဆုံးသတ်ပေလိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်ထုတ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကြာခဏ, သူတို့ဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဂိမ်းအတုခေါ်ဆိုမှု ID app ကို ယူ. ကြောင့်မှားယွင်းနေတတ်အခါတိုင်းအမြဲတမ်းဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပြောင်းလဲနေတဲ့၏ဤလုပ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသူတစ်ဦးအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုအွန်လိုင်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကောင်လေးတစ်ဦး Chinaman ဖြစ်ထွက်လှည့်လို့ပဲ။ အတုအရေအတွက်အားဖြင့်သင်သည်အရေအတွက်ကိုပြောင်းလဲအဆက်အသွယ်ဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်လက်လှမ်းမမှီပါဖြစ်လာဖို့မလိုအပ်ပါဘူး သင်ရုံအခြားအတုအရေအတွက်အားတောင်းဆိုရန်နှင့်ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းကိုသုံးပြီးရပ်တန့်နိုင်ပါ။
အတုခေါ်ဆိုမှု ID app များကိုသင့်လက်ရှိဖုန်းများပေါ်တွင် burner ဖုန်းကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်:
burner ဖုန်းများကြီးမြတ်- မှလွဲ. များမှာသူတို့ပိုက်ဆံကုန်ကျနှင့်သင့်ပတ်လည်-သင့်ရဲ့အဓိကဖုန်းနှင့်သင့် burner နှစ်ခုဖုန်းများသယ်ဆောင်ရန်ရှိသည်။ အတုခေါ်ဆိုမှု ID app များကိုဤပြဿနာကိုဖြေရှင်း။ android ဖုန်းများအတွက်တစ်ဦးကအတုခေါ်ဆိုမှု ID app ကိုများသောအားဖြင့်စျေးပေါ-အချို့ဖြစ်ပါတယ်အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်တို့ပတ်လည်နှစ်ခုဖုန်းများသယ်ဆောင်ရန်မလိုပါ။ တစ်ဦးကအတုခေါ်ဆိုမှု ID app ကိုသင့်ရဲ့အထောက်အထားကို သိ. ခေါ်ဆိုမှုလက်ခံရရှိသူနှင့် ပတ်သက်. နှောင့်ရှက်နေတဲ့ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမဖြစ်စေဘဲဖို့လိုအပ်တဲ့ tools တွေကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးပါသည်။
Android အတွက်အတု CALLER ID ကိုအက်ပ်များ
ဈေးကွက်ထဲမှာအတုခေါ်ဆိုမှု ID apps များရာချီရှိပါတယ်။ တချို့ကအခမဲ့ဖြစ်ကြပြီးအများဆုံးအတော်လေးစျေးပေါနှင့်သင့်ပိုက်ဆံတန်ဖိုးရှိပါ၏ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သင်၏ Google Play Store အားကနေ download နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, လူအစုအဝေးထဲကရပ်တည်ကြောင့် Spoofcard ကြောင်း app တစ်ခုတည်းရှိပါတယ်။ Spoofcard သင်အကောင်းဆုံးခေါ်ဆိုမှု ID ကာကွယ်မှုပေးစျေးနှုန်း App ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app ကသင့်ကိုမှန်ကန်အရေအတွက်ဖွစျပှားစေဆိုဖုန်းခေါ်လိမ့်မည်ဟု features တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ Spoofcard လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်စာရင်းပေးသွင်းထားမှုအားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ spoofcard နှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့အစစ်အမှန်အရေအတွက်အတုအရေအတွက်က assign နိုင်ပြီး, သင်သည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခံယူ, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နှင့်သင့် subscription ကိုခွင့်ပြုချေးငွေသင်၏နံပါတ်ပေါ် -depending သည်အခြားအံ့သြဖွယ်ပစ္စည်းပစ္စယလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အခွားသောအတုဖုန်းခေါ် app များကိုကျွန်မရဲ့နံပါတ်, ပြောင်းလဲခြင်းဖုန်းနံပါတ်, Teleos, အတုခေါ်ဆိုမှု Hide, CallApp ပါဝင်သည်။ ဒီ app အများစုဟာသို့သော်အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း, သင်အတုဖုန်းခေါ် app ကိုအဘို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သမျှသော features တွေရယူနိုင်တော့မည်မည်မဟုတ်ပါ။
အကျဉ်းချုပ်မှာတော့ app ကိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတာသိရန်, သင်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်အခမဲ့သူတွေကိုထွက်ကြိုးစားနိုင်ပါ။ သင်သည်သင်၏လက်ရှိလိုအပ်ချက်များကို fit လိမ့်မည်ဟုတဦးတည်းရစေခြင်းငှါ,; သို့သော်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလက်ခံရရှိတူသောကျယ်ပြန့် features တွေအဘို့, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်း, အ Spoofcard ကြေးပေးသွင်းဝယ်ယူစဉ်းစားပါ။
အတုခေါ်ဆိုခ - နောက်ပြောင်မှုများ
ကင်မ် Ariyor ...
တီဗီအတွက်အဝေးထိန်း၊ Universal TV Remote –...